ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း၏ သားဦးအောင်ဆန်းဦး (၁၀၁) နှစ်ပြည့် အဖေ့ မွေးနေ့ ကျင်းပ | Danya Wadi
Towards Peaceful Society ငြိမ်းချမ်းသောလူ့ဘောင်သစ်ဆီသို့	Burmese Version
Browsing: » Home »သတင်းများ»ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း၏ သားဦးအောင်ဆန်းဦး (၁၀၁) နှစ်ပြည့် အဖေ့ မွေးနေ့ ကျင်းပ	Leaveacomment
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း၏ သားဦးအောင်ဆန်းဦး (၁၀၁) နှစ်ပြည့် အဖေ့ မွေးနေ့ ကျင်းပ	Posted by danyawadi on February 14, 2016 in သတင်းများ	ဖေဖော်ဝါရီ ၁၃ ရက်တွင် ကျရောက်သော ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း၏ (၁၀၁) နှစ်ပြည့် မွေးနေ့ပွဲကို သားကြီးဖြစ်သူ ဦးအောင်ဆန်းဦးက ပုဂံမြို့၊ တောင်ဘီရပ်ကွက်ရှိ ၎င်း၏နေအိမ်၌ ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
ယနေ့ (ဖေဖော်ဝါရီ ၁၃ ရက်)တွင် ကျရောက်သော ဗိုလ်ချုပ်မွေးနေ့ပွဲကို ဦးအောင်ဆန်းဦးက တောင်ဘီရပ်ကွက်ရှိ ကလေးငယ် ၃၀ ခန့်အား ဖိတ်ကြားပြီး ခေါက်ဆွဲ၊ ကြာဆံ၊ ကိတ်မုန့်နှင့် ရေခဲမုန့်တို့ကို ကျွေးမွေးခဲ့သည်။ ထို့အပြင် မွေးနေ့ပွဲ သို့ လာရောက်သော ကလေးငယ်များကို တစ်ဦးလျှင် ၂,၀၀၀ ကျပ်စီပေးခဲ့သေးသည်။
“မနှစ်က ၁၀၀ ပြည့်နှစ်တုန်းက ကလေးတွေ ၄၀၀ ကျော်ဖိတ်ပြီး အဖေ့မွေးနေ့ပွဲလုပ်ခဲ့တယ်။ ဒီနှစ်က အချိန်လည်း မရတာနဲ့ ရပ်ကွက်ထဲက ကလေးတွေကိုခေါ်ပြီး မုန့်ကျွေးတာပေါ့”ဟု ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း၏ သားအကြီး အသက် (၇၂) နှစ်အရွယ်ရှိ ဦးအောင်ဆန်းဦးက သတင်းထောက်များအား ပြောကြားသည်။
နိုင်ငံတစ်ဝန်း မြို့နယ်အသီးသီးတွင် ဗိုလ်ချုပ်မွေးနေ့ကို ကျင်းပပြုလုပ်ပေးသော လူငယ်များအားလည်း ကျေးဇူးတင် ကြောင်း ၎င်းက ဆက်လက်ပြောသည်။
Permalink	Post navigation
← မြန်မာရိုဟင်ဂျာ ဒုက္ခသည်တွေကို ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် က သန်းခေါင် စာရင်း ကောက်ယူ	ဗြိတိန် အမတ် မြန်မာပြည်မှာ သင်တန်းပေး →
Popular Posts	GTC ကျောင်းသား/သူနှစ်ဦး၏ဗီဒီယိုဖိုင်	လူနည်း စု၏ဆန္ဒကို လျစ်လျူရှုထား၍ မရ ဟု နိုင်ငံတော် သမ္မတ ဦးထင်ကျော် က ဆို	ဆယ်တန်းကျောင်းသူလေးကိုစစ်ဗိုလ်ကြီးကအဓမ္မ ကျင့် ပါ တယ် ဆို တဲ့ ကိစ္စ အ တွက် ဆယ် တန်း ကျောင်း သူလေး ယွန်းသော် တာမြတ်နိုး ရဲ့ တောင်း ပန် စာ...	The History of ROHINGYA MUSLIMS of Arakan (Rakhine state) , Burma.	ဓည၀တီဆိုဒ်သို့မှန်ကန်သော သတင်း၊ ဆောင်း ပါး၊ ဓါတ် ပုံ များ ပေး ပို့ လို ပါ က danyawadi9@gmail.com နဲ့ ဆက် သွယ် ပါ ။ . . . If you want to post any real documents such as , History,Articles , photos and News ,Contact here.	THIT HTOO LWIN Movies, Videos, VCD, Latest	Rohingya to English Dictionary ( A to Z )	မြွေဟောက် ဘယ်လို အဆိပ်ထုတ် တိုက်ခိုက် သလဲ (ရုပ်သံ)	လိပ်ခေါင်းရောဂါနှင့် တရုတ်တိုင်းရင်းဆေးအမြင်	Myanmar Love Stories eBooks	Recent Posts	ရခိုင် အကြံပေး ကော်မရှင် အဖွဲ့ သမ္မတ ဦးထင်ကျော် နဲ့ တွေ့ဆုံ
လူမျိုးတုံး စွပ်စွဲချက် အတိအကျ စုံစမ်း စစ်ဆေးဖို့ လိုအပ်ဟု ကိုဖီအာနန် ဆို
မြွေဟောက် ဘယ်လို အဆိပ်ထုတ် တိုက်ခိုက် သလဲ (ရုပ်သံ)
ရိုဟင်ဂျာ ကိစ္စ ဆန္ဒပြပွဲ မလေးရှား ၀န်ကြီးချုပ် ဦးဆောင်
ရခိုင်အကြံပေး ကော်မရှင်ရဲ့ ရခိုင် ခရီးစဉ် အဆုံးသတ်
ရခိုင်ကိစ္စမှာ ပြည်တွင်းရေး မဟုတ်ဘဲ နိုင်ငံ တကာ ပြဿနာ ဟု မလေးရှားပြောကြား
ရခိုင်ပြသနာ အတွက် နိုင်ငံတကာကို ဒေါ်စုဝေဖန်
နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ၏ ပြည်တွင်းရေးကို ၀င်မစွက် ဖက် ရ ဟူ သည့် အာဆီယံ ပဋိညာဉ်ကို မလေးရှား အစိုးရ လိုက်နာရန် မြန်မာ အစိုးရပြော
စစ်တွေရောက် ကိုဖီအာနန်ကို ဒေသခံတွေ ဆန္ဒပြ
တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် မဟာမိတ် ၄ ဖွဲ့ကို အကြမ်းဖက် အဖွဲ့ သတ်မှတ်ဖို့ ကာဝန် တိုက်တွန်း
State & Region UTM Map
ရိုဟင်ဂျာအရေး လူသားထုအပေါ် ကျုးလွန်တဲ့ ရာဇဝတ်မှုဖြစ်နိုင်ကြောင်း ကုလသမဂ္ဂပြော
အီဂျစ်တွင် နှစ် ၇၀၀၀ သက်တမ်း ရှိ ရှေးဟောင်းမြို့ တွေ့ရှိ
ကျောင်းထောက်ပံ့ကြေးများကို ကိုယ်ကျိုး အလွဲသုံးရင် အရေးယူမည်
ဗလီအဇာန်သံကြောင့် မိန့်ခွန်းကိုရပ်နားပြီး ပုဝါခြုံလိုက်တဲ့ အိန္ဒိယ လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌ
“ဒုဝန်ကြီး ဒေါက်တာထွန်းဝင်း ထုတ်ပယ်ခံရသည့် အကြောင်းရင်း”
စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးနဲ့ ဆည်မြောင်း ဒုဝန်ကြီး ရာထူးကနေ ရပ်စဲ
​မောင်​​တော အကြမ်းဖက်​မှု နှင့်​ ပတ်​သက်​၍ နိုင်​ငံ​တော်​ အဆင့်​ စုံစမ်း စစ်​​ဆေး​ရေး ဖွဲ့မည်​
Former U.N. chief ‘deeply concerned’ as Myanmar violence toll jumps
ရခိုင်အရေး အစိုးရရှင်းလင်းချက် HRW တုန့်ပြန်
Human Rights Watch (HRW) ၏ အစီရင်ခံစာပါ အချက်များ ရှင်းလင်းပွဲကျင်းပ
ရခိုင်ပဋိပက္ခ အပေါ် နိုင်ငံတကာ ဥပဒေများနှင့် အညီ ထိန်းထိန်း သိမ်းသိမ်းဖြေရှင်းနေဟု တပ်မတော်ဆို
ပုဒ်မ ၆၆ (ဃ) မရှိသင့် ဟု ဒေါက်တာ သန်းထွဋ်အောင်ပြော
အနိုင်ရ သမ္မတလောင်း Donald Trump ကို ဖုန်းခေါ်ပြီး Obama ချီးကျူး
ဥရောပ သမဂ္ဂကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်များ၏ စစ်​ဘက်​ ​ဆွေး​နွေးချက်​
မြန်​မာနိုင်​ငံ တည်​ငြိမ်ျအးချမ်းပြီး တိုးတက်​​စေလိုလျှင်​ ပဋိပက္ခ ချုပ်​ငြိမ်း ရမည်​ဟု ​ဒေါ်စု​ပြော
The Authenticity of “Rohingya Identity”
နှစ်​​ပေါင်း ၇၀ ကြာမှ super moon မြင်​ရမယ်​၊ ငလျင်​နဲ့ ဆူနာမီ အန္တရာယ်​ရှိ
ဂျပန်မှ ပေးသည့် ယန်း ဘီလီယံ ၈၀၀ မှ ၄၀ ဘီလီယံ ကို ရိုဟင်ဂျာများ အတွက် သုံးစွဲမည် ဟု ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည် ပြော ကြားခဲ့
ပြည်သူ့ရဲ ဆိုသူများက “လဝက ” ဌာနမှ ထုတ်ပေးသော မှတ်ပုံတင်ကတ်ကို ဘာကြောင့် အသိအမှတ် မပြုရတာလဲ?
မှတ်ပုံတင် မရသေးသူများ ဆောင်ရန်၊ရှောင်ရန် နှင့် ၁၉၄၉/၅၁ လ.၀.က ဥပဒေများ အကြောင်း သိကောင်းစရာ
ရိုဟင်​ဂျာ စကားနှင့်​ ဘင်္ဂါလီ စကားကွဲပြား ခြားနားခြင်း Different of Rohingya and Bengali Langusge
GP နှင့် SP ခြားနားခြင်း သိကောင်းစရာ
ရောင်းမှားဝယ်မှား မဖြစ်ရအောင် မြေအမျိုး အစား အလိုက် စာရွက် စာတမ်း စစ်ဆေးသင့်
၁၁ ယောက်မြောက် အိန္ဒိယ သမ္မတ ဒေါက်တာ အဗ်ဒုလ် ကလာမ် အကြောင်း
Ms. Yanghee Lee လူ့အခွင့် အရေး အစီရင်ခံစာ ကုလ ညီလာ ခံတင်သွင်း
ရခိုင်ပြည်နယ် စစ်ဆင်ရေး အတွင်း လူ့အခွင့် အရေး ချိုးဖောက်မှု စုံစမ်းဖို့ ကုလ တိုက်တွန်း
ချင်းတွင်းမြစ် မှာ နစ်မြုပ် ခဲ့တဲ့ ရေယာဉ်ရဲ့ ပဲ့ထိန်း ကို ဖမ်း ၀ရမ်း ထုတ်
နစ်မြုပ် ချင်းတွင်း အမြန်ရေယာဉ် ကို ဆယ်ယူနိုင်ပြီ၊ အလောင်း များ တွေ့ရှိ (ရုပ်သံ)
ပြည်သူ့လွတ်တော် အမတ်ဟောင်း ဒေါ်ဒွဲဘူ မှ ကာချူပ်သို့ ပေးစာ
ထိုင်းဘုရင့် သမီးတော် သီရိဒုံကို ရင်နင့်စေသော ခမည်းတော် ဘုရင်ကြီး၏ ပေးစာ
ထီးနန်းဆက်ခံမှုနှင့် ပတ်သက်၍ မစိုးရိမ်ကြရန် ထိုင်းအိမ်ရှေ့မင်းသားပြောကြား
တန်ဖိုးနည်းအိမ်ရာကို အိမ်ရာဖွံ့ဖြိုးရေး ဘဏ်မှာ ငွေ စာရင်း ဖွင့်ထားသူတွေ ဦးစားပေးမည်
Press release: မောင်တောမြို့နယ် အတွင်း အကြမ်းဖက် တိုက်ခိုက်မှု သတင်း ထုတ်ပြန်ချက်
ရခိုင်ပြည်နယ် သတင်း နိုင်ငံတကာက သိစေနိုင်ဖို့ သမ္မတရုံး တရားဝင် Twitter အကောင့် ဖွင့်လှစ်
အင်တာဗျူး(236)
မြန်မာ – English (9)
Burmese Version (1)
English Dictionary (1)
Other Dictionary (1)
English – မြန်မာ (8)
English – Rohingya (3)
English Version (1,395)
Arakan History (180)
Burmese History (56)
M-M History (45)
Local News (285)
Open Letter (11)
World News (434)
Other Religious (2)
English-Myanmar, Pali-Myanmar (1)
Other Dictionary (5)
Popular Post (5)
Rohingya – English (9)
Archives ယခင် ပိုစ်များဖတ်ရန်	Archives ယခင် ပိုစ်များဖတ်ရန်
March 2016 (96)
December 2015 (140)
May 2015 (143)
December 2014 (289)
November 2014 (175)
October 2014 (195)
July 2014 (266)
June 2014 (184)
May 2014 (314)
April 2014 (256)
February 2014 (218)
January 2014 (340)
December 2013 (258)
September 2013 (234)
August 2013 (387)
July 2013 (359)
June 2013 (533)
May 2013 (672)
April 2013 (701)
March 2013 (717)
February 2013 (626)
January 2013 (861)
December 2012 (712)
October 2012 (719)
August 2012 (553)
June 2012 (541)
May 2012 (423)
April 2012 (360)
Danyawadi’s Pages	နိုင်ငံရေးစာပေ
၁၈၂၄ မတိုင်မီကပင်ရိုဟင်ဂျာများရခိုင်ပြည်တွင် ရှိ ကြောင်း မြန်မာ့သမိုင်း၊ ကမ္ဘာ့သမိုင်း ပ ညာ ရှင် များ အ တည် ပြု ပြော ဆို
Total guests visited လာဖတ်သည့် ဧည့်သည်ပေါင်း 3,916,185 ဦး
Visitors’ Countries Since 16-11-2012;လာဖတ်သူတို့ နိုင်ငံ	Click here to read the articles by date-posted ရက်စွဲ အလိုက် ဖတ်ရှုရန် February 2016
WordPress.com	Graphics for Animated
World News	https://nasirmyn.files.wordpress.com/2015/12/myanmar-flag-with-pool-2.gif